Taariikhdii duugoowday ee Mumbai oo la soo nooleynayo - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka VIKAS DILAWARI
Image caption Biyo-Dhac Qadiimi ah
Magaalada Mumbai ee xarunta ganacsiga dalka Hindiya waxaa ku yaala goobo badan oo qadiimi ah oo laga sameeyey biyo-dhacyo , halkaasi oo shimbiruhu ku loolamaan sidii ay biyaha oga cabbi lahaayeen.
Waxaa laga dhex dhisey darjiinooyin dadka ay ku nastaan, kuna indho-doogsadaan.
Waxa ay ka mid ahaayeen bilicda magaalada iyo astaamaha muujinaya nolosha caadiga ah, balse badankood ayaa baaba'ay, kadib dayac badan oo soo wajahay.
Rahul Chemburkar ayaa tilmaamaya qeyb ka mid ah asaaska biyo-dhacyadan oo inta duugmay lasoo faagay, xili la waday hawl lagu dayactirayo goobahan muhiimka ah.
"Dhinacyada oo dhan ayaa laga soo riixey, waxaana lumey aqoonsigoodii, hadda shaqadan aan ka heyno waa sidii anaga oo macdan dhulka ka qodeyno oo kale, markasta oo aan banaanka usoo saarno qeyb yar, taasi waxa ay micnaheedu tahay in qeyb yar oo taariikh ah aan soo bandhigney" ayuu yiri Rahul.
Rahul waxa uu qeyb ka yahay mashruuc dib loogu soo nooleynayo taariikhdii duugantay ama duugoowdey ee Mumbai, isaga oo sannadkii hore asaasay mashruuca Mumbai Vaastu Vidhaan lagu magacaabo si loogu ifiyo muhiimadda taariikhda magaalada Mumbai iyo waliba qalcadaha ama taallooyinka muujinaya taariikhda dhaqan-dhaqaale ee magaaladan.
Mumbai waxaa ku yaala illaa 50 goobahan biyo-dhacyada ah oo kale ah, baddankood waa darjiinooyin ama beeraha loo nasiino tago, qaarkood ayaa burburey dayac awgiis ama sababo kale.
Mumbai waxa ay caan ku tahay qalcadaha iyo dhismayaasha qadiimiga ah ee uu gumeystihii dhisey sida dhismaha boostada, kan jaamacadda Mumbai iyo waliba kan boosteejada tareenka. Kuwaasi oo kaliya ma ahan, waxaa kale oo jira kuwa kale oo aad u badan oo yaryar oo dadka maalin kasta ay arki karaan.
Goobaha la dayactirey waxaa ka mid ah biyo-dhaca Flora Fountain oo la dhisey sannadkii 1868-dii, waxa ay ku taalaa isgoys aad u mashquul badan oo ay ku hareereysanyihiin dhismayaal qadiimi ah.,
Goobahan ayaa laga cabbi jirey biyo nadiif ah xiligii hore, waxaana sidoo kale loogu talogalay in lagu muujiyo bilicda magaalada.
Waxa ay ka mid tahay tii afaraad oo dib dayactir loogu sameeyay, waxaana sidoo kale jirta goob kale oo iyadu laga cabbi karo biyaha nadiifka ah magaalada dhexdeeda.
Sannadihii lasoo dhaafay maamulka magaaladan waxa uu ku hawlanaa soo nooleynta keydka biyaha ee Mumbai, waxaana la sameeyey dayactir badan.
Mulji Fountain waa mid kale oo ka mid ah goobaha biyo-dhaca ah, waxaa dib loogu dayactirey qarash ay bixiyeen urur lagu magacaabo Kala Ghoda Association, kuwaasi oo sidoo kale dayactirey goob kale oo aan taas ka fogeyn oo iyadu la dhisey sannadkii 1873-dii
"Ma aqbali karno in ay burburaan goobaheena taariikhda " ayuu yiri Maneck Dayac oo ah guddoomiyaha ururka oo BBC-da la hadlay, wuxuuna intaasi ku daray in ururkooda loo dhisey si dib loogu soo nooleeyo wax kasta oo raadadkii taariikhda ah.
Inkasta oo inta badan hawshani ay waddo dowladda hoose oo iyadu leh dhulka ay goobahani ku fadhiyaan, haddane waxaa maalgalin laga heley dhinacyo kale oo shacabka ka mid ah.
Shacabka qaarkood ayaa xitaa kasoo diga haddii ay arkaan goob taariikhi ah oo la burburin rabo, kaddibna dowladda hoose ay ka hortagtaa falkaasi.
Rahul ayaa dowladda hoose u gudbiyey qariidad muujineysa meelaha ay ku kala yaalaan goobaha biyo-dhacyada ah iyo habka ugu wanaagsan ee lagu soo celin lahaa.